Teclast F6 Pro Laptop မှစျေးနှုန်း ...
အစကွန်ပျူတာနှင့်ကွန်ပျူတာထောက်ပံ့ရေးပစ္စည်းများမှတ်ချက်စာအုပ်Teclast F6 Pro ကိုလက်တော့
နောက်ဆုံးစက်တင်ဘာ 2018 စက်တင်ဘာ 28 17:43 ရက်တွင်နောက်ဆုံးရေးသားချိန်
Teclast F6 PRO 8GB 128GB Silver,
Teclast F6 Pro ကို Notebook လက်ဗွေအသိအမှတ်ပြု
TECLAST F6 PRO Core M3-7Y30 2.6GHz 8GB RAM ကို SSD ကို 128 13.3 Zoll? IPS Bildschirm ကို Windows 10 ...
စစ်မှန်သော TECLAST F6 Pro ကို 13.3 က IPS dual-core Notebook (128GB / အက်စ်)
Teclast F6 Pro ကို Notebook ကို Windows 13.3 10 လက်မ Dual-Core RAM ကို 8GB 128GB SSD ကို
TECLAST F6 PRO Core M3-7Y30 2.6GHz 8GB RAM ကို SSD ကို 128 13.3 လက်မ IPS မျက်နှာပြင် Notebook ကို Windows 10 ...
စစ်မှန်သော TECLAST F6 Pro ကို 13.3 က IPS dual-core Notebook (128GB / အီးယူ)
Teclast လက်ပ်တော့မှတ်စုစာအုပ် F6 PRO 13.3 လက်မအရွယ် touchscreen Intel Core M3-7Y30 8G 128GB RAM ကို SSD ကို Windows10
Teclast F6 Pro ကို Notebook 13.3 လက်မ Intel Core m3-7Y30 8GB / SSD ကို 128GB Silver, လက်ဗွေအသိအမှတ်ပြု
●3GHz အထိ core m7 30Y1.0 dual-core 2.6GHz,
ultra-Low-ဗို့ပလက်ဖောင်းနှင့် Dual-core အပြောင်းအလဲနဲ့သွားကြဖို့အများဆုံး High-ထိရောက်မှုပါဝါပေး
on-processor ကိုမျှဝေထားသောဗီဒီယိုမှတ်ဉာဏ်နှင့်အတူဂရပ်ဖစ်ကိုအင်တာနက်အသုံးပြုမှုအတွက်မြင့်မားတဲ့ပုံရိပ်အရည်အသွေး, အခြေခံဓာတ်ပုံတည်းဖြတ်နှင့်ပေါ့ပေါ့ဂိမ်းကစားပေး။ ဒီထက်ပါဝါသုံးစွဲဖို့ optimized
●အဆင့်မြင့် multitasking များအတွက် 8GB DDR3 RAM ကို
●13.3 နှင့်အတူ 1920 လက်မအရွယ် IPS မျက်နှာပြင် 1080 ဆုံးဖြတ်ချက် x
က IPS FHD display ကို (1920 1080 က x), သငျသညျကွက်ကွက်ကွင်းကွင်းနှင့်ရောင်စုံအမြင်အာရုံခံစားတတ်၏
●ဓာတ်ပုံများနှင့်မျက်နှာ-to-မျက်နှာ Chat ကိုများအတွက်ကင်မရာ
သငျသညျအမှတ်ရစရာအချိန်လေးကိုဖမ်းယူဒါမှမဟုတ်သူငယ်ချင်းတွေနဲ့အတူ chat ပေးနိုင်ပါတယ်ရှေ့ကင်မရာ 2.0MP
●လိုက်ဖက်တဲ့ဖုန်းများအတွက်နှင့်အတူဘလူးတုသ် 4.2 Interface ကို Sync
ကြိုးမဲ့ကွန်ပျူတာနှင့်သင့်ဘလူးတုသ်-enabled ဆဲလ်ဖုန်းသို့မဟုတ် MP3 ကစားသမားများအကြားဓာတ်ပုံများ, ဂီတနှင့်အခြားမီဒီယာလွှဲပြောင်းခြင်းသို့မဟုတ်ဘလူးတုသ်ကြိုးမဲ့ဆက်စပ်ပစ္စည်း connectမှတ်ချက်: သင်ပိုမိုသိုလှောင်မှုလိုအပ်တယ်ဆိုရင်ဒီ laptop ကိုတစ်ဦးတည်းသာ SSD ကို slot က (128GB) ရှိပြီး, ကိုယ့်ကိုယ်အားဖြင့်ပြောင်းလဲပစ်ရန်ပိုကြီးတဲ့သိုလှောင်မှုနဲ့အတူအသစ်တခု SSD ကိုမဝယ်ပါ။
core: 1GHz, Dual-core
CPU ကို: Intel Core M3 7Y30
graphic chipset: Intel HD Graphics 615
မော်ဒယ်: PRO F6
CPU ကိုစီးရီး: Intel Core
ဂရပ်ဖစ်ကတ်ကြိမ်နှုန်း: 300MHz - 900MHz
Hard Disk ကိုမှတ်ဉာဏ်: 128G SSD ကို
ဘလူးတုသ်: ဘလူးတုသ် 4.2
ဘက်ထရီအမျိုးအစား: 7.6V / 5000mAh Li-အပေါ်ပေါ်လီမာဘက်ထရီ
ဘာသာစကားများ: မှာ Windows OS ကိုအင်္ဂလိပ်လို-built ဖြစ်ပါတယ်နှင့်အခြား languanges Wi-Fi တို့ကဒေါင်းလုပ်လုပ်ခံရဖို့လိုအပ်ပါတယ်။
package အရွယ်အစား: 37.00 x ကို 26.00 x ကို 8.00 စင်တီမီတာ / 14.57 x ကို 10.24 x ကို 3.15 လက်မ
package အလေးချိန်: 2.3790 ကီလိုဂရမ်
ကုန်ပစ္စည်းအရွယ်အစား: 31.50 x ကို 20.80 x ကို 1.60 စင်တီမီတာ / 12.4 x ကို 8.19 x ကို 0.63 လက်မ
ကုန်ပစ္စည်းအလေးချိန်: 1.3880 ကီလိုဂရမ်
Teclast F6 Pro ကိုပြန်လည်ဆန်းစစ်ခြင်း - တစ်ဦးကဂရိတ် Core M3 360-ဒီဂရီ Convertible
Teclast F6 Pro ကိုလုပ်ဆောင်ခြင်းပြီးတော့လက်ကမ်းတွင်
အသေးစိတ်ဖော်ပြချက်: Teclast F6 Pro ကိုလက်တော့
Brand: Teclast, Model:F6 Pro, Product type:Notebook, OS: Windows 10, CPU: Intel Core M3-7Y30, Core: Dual Core,1GHz, Caching: 4MB, Graphics Type: Integrated Graphics, Graphics Chipset: Intel HD Graphics 615, Graphics Card Frequency: 300MHz - 900MHz, Process Technology: 14nm, Power Consumption: 4.5W, Threading: 4
screen size: 13.3 လက်မ, Display ကိုအချိုး: 16: 9, screen resolution ကို: 1920 1080 (FHD), မျက်နှာပြင်အမျိုးအစားက x: က IPS
WIFI: 802.11b / g / n / ac 2.4 / 5GHZ ဘလူးတုသ်: 4.0
1 * မှာ USB Type-C ကိုကို USB *23.0,2* စတီရီယိုစပီကာ, 1 * 3.5mm headphone jack, HDMI Micro နဲ့ HDMI
ဘက်ထရီအမျိုးအစား: Built-in လီယွန်ပေါ်လီမာဘက်ထရီဘက်ထရီစွမ်းရည်: 7.6V, 5000mAh, ဘက်ထရီဘဝကို: ပမာဏ, AC adapter အပေါ်မှီခိုအကြောင်း 8 နာရီ,: 100-240 12V 2V
ရုပ်ပုံပုံစံ:, BMP, GIF, JPEG, JPG, PNG, ဂီတပုံစံ: MP3 က MS Office ကို format နဲ့: Excel, PPT, သမ်မာကမျြး
ကုန်ပစ္စည်းအရွယ်အစား: 31.50 20.85 1.50 က x စင်တီမီတာ Package ကိုအရွယ်အစားက x: 38.50 31.50 8.50 စင်တီမီတာကုန်ပစ္စည်းအလေးချိန် x x ကို: 1.3930 အထုပ်အလေးချိန်ကီလိုဂရမ်: 2.3670 ကီလိုဂရမ်
မှတ်စုစာအုပ် * 1, 1 * USB ကြိုး, အင်္ဂလိပ်ကို manual * 1, 1 ပါဝါ adapter *
Teclast F6 Pro ကိုလက်တော့ဗီဒီယိုများ
ချစ်သူ - 2019 10 ဇွန်
ငါဆိုသည်ကားရန်ရက်ပေါင်းနှင့်မဖြစ်မနေ၏စုံတွဲတစ်တွဲအဘို့ဤ Laptop ကိုသုံးပြီးတော့ - '' ဒါဟာတကယ်ကြီးမြတ် Laptop ကိုဖွင့်! '။ ပစ္စည်းလုနီးပါးစုံလင်သောအရည်အသွေး, ကောင်းသော Screen, ခလုတ်ကြောက်မက်ဘွယ် ... သင် $ 500 ၏စျေးနှုန်းအဘို့တခြားဘယ်အရာကိုမလိုအပ်ပါဘူး။ ... တောက်ပခြင်းနှင့်အနည်းငယ်ပေါ့ပါး SSD ကိုအသံအတိုးအကျယ်နှင့်အပိုကြီးလက်ပ်တော့ရဲ့အလေးချိန်လမိုင်းမျှမျက်နှာပြင်နိုင်ပေမယ့်သင်ဤလက်ပ်တော့နှင့်အတူစတင်အလုပ်လုပ်ရသောအခါသင်အမှန်တကယ်အားလုံးသည်ဤ 'cons' 'အကြောင်းကိုမေ့လျော့ - သေချာတာပေါ့အရာကမစုံလဖြစ်ပါတယ်။ ငါက '' ဂျက်ဒုံးပျံ '' ရဲ့ Programmer .Net နှင့်မည်သည့်ပြဿနာမျှမရှိဘဲအပြေး Visual Studio 2017 နွယ်ဖွား, VS ကုဒ်မိပါတယ်။ ငါသည်ငါ့ Lenovo က Z50 အတူကနှိုင်းယှဉ်ပါလျှင်ငါကဘက်ထရီအသက်တာကိုတကယ်အကောင်း perfect.- မဟုတ်ဘူးဒါပေမယ့်ဝေးကြေညာလိုက်သည် 8 နာရီကနေ, သင်ပျမ်းမျှအားအသုံးပြုခြင်း၏ကောင်းသော 4-4.5 နာရီများကပြောသည်အဖြစ်သာတစ်နှစ် ... incomparable.But ... လွန်ခဲ့တဲ့ဝယ်ခဲ့ပါတယ်ဘယ်ဟာ ။ - ငါကဆိုပါတယ်အဖြစ်မျက်နှာပြင်, ကောင်းလှ၏သို့သော်သင်မြင့်မားသောစွမ်းဆောင်ရည်နှင့်အတူကစတင်သုံးစွဲတဲ့အခါမှာဒါဟာအချို့ကြီးတွေအစီအစဉ်များ product- နောက်ဆုံးတဦးတည်းဒေါင်းလုဒ်လုပ်ပြီး install အထူးသတဲ့အခါမှာတော်တော်နွေးလာပြီရဲ့ ... ပြီးတော့ဆုကျေးဇူးတော်ကိုလည်းမရှိ cover- သင်ပြင်ပတွင် Anti-တောက်ပလိုအပ်လိမ့်မည်နည်း ဒီ laptop ကိုအတူလာမယ့်, ငါဆိုလို - ကိစ္စတွင်, မောက်စ်နဲ့တံ, Despi ငါ Net ကအပေါ် Flexible နှင့်စျေးနှုန်းအဘို့ဤ Laptop ကိုဝယ်ဆိုလိုသည်မှာ - $ 560 ကြောင့်အီတလီနှင့်အာမခံကနေဟန်ဂေရီမှပေးပို့င်အပါအဝငျ။ ငါအနည်းဆုံးလက်ဆောင်တစ်ခုတံခံထိုက်သည်ဤစျေးနှုန်းအဘို့အလို့ထင်ပါတယ်။ သငျသညျမစ္စတာဘယ်လိုထင်ကြဘူး Gearbest 🙂? သငျသညျအကြှနျုပျအဘို့လုံးဝအသုံးမကျ, ဂရိတ်ဗြိတိန်မှာသုံးပြီးအဘို့ရည်ရွယ်လျှပ်စစ်ပလပ်များအတွက်အထူးပေးပို့ adapter နဲ့ငါ့ကိုစေလွှတ်တော်မူ, ဒါပေမယ့်ဒီစျေးနှုန်းအဘို့အသငျသညျကြှနျုပျလက်ပ်တော့အတူထုပ်ပိုးနေတဲ့တံပေးပို့နိုင် ... ဒါပေမယ့်ယေဘုယျအားဖြင့်စကားပြော - ငါမဝယ်ဘို့ဤ Laptop ကိုအကြံပြု (တောင်မှ ဆုကြေးဇူးကို😉အပေါ်မည်သည့်အခွင့်အလမ်းမရှိဘဲ), ဗလာဒီမာ Lengyel ကခံစားကြည့်ပါ
Andrey2000 - 2019 10 ဇွန်
+ Легкийипрочныйалюминиевыйкорпус။ + Превосходныеуглыобзораэкранаикачествоцвета။ + Отличнаяклавиатура, напоминаетстарые MacBook ။ ။ Приятнонабиратьмноготекста + Хорошийтрекпад, оченьчувствительныйиточный + 360 градусовразворот + Хорошийичувствительныйсенсорныйэкран + Оченьбыстрыйпроцессори 8Gb RAM ကို - ။ ။ ။ устройствооченьотзывчивовработе + Нормальнаягромкостьзвука, звуклучшийсредипрочихустройствэтого класса, которыемнедоводилосьиспользовать + Полныйнаборпортов: ။ ။ ။ 2xUSB 3.0, MicroHDMI မှာ USB Type-C + Хорошаябатарея, до6часовработыпри 100% яркостиэкрана, хотямоглобыбытьибольше + естьвозможностьзарядкичерезမှာ USB Type -C (необходимозарядноеустройствосပါဝါ Delivery) ။ + Оченьбыстрыйсканеротпечаткапальца - ။ ။ мгновеннаяразблокировка + Лицензионнаяကို Windows 10 + Полноценнаяподдержкааппаратнойвиртуализацииоченьценнадляразработчиков.Используюнесколькомесяцевдля web-разработки + အွန်လိုင်းဗီဒီယို / Youtube ကို - никакихпроблем! Яоченьрадэтойпокупке။ Затакуюценуэтолучшееустройствоизвсехпрочих! Ясчастлив! - Небольшойзапасяркостиэкрана။ Наулицевсолнечнуюпогодунеполучитсяпользоваться.- 128Gb SSD ကိုдляменяслишкоммало, пришлосьзаменитьна 240Gb.- Хотелосьбывидетьмодельс 16Gb RAM ကိုпотомучтобольшойобъём RAM ကိုнеобходимдляразработкиитестированияприложений။
အင်ဒရူး - 2019 10 ဇွန်
ငါ့ကိုဖြောင့်ရကြစို့ - laptop ကိုအတွင်းသဘောကြီးလှ၏။ ကောင်းပြီကို လုပ်. , ကောင်းသောစွမ်းဆောင်မှုအလွန်ကောင်းတဲ့နှင့်တက်ကြွ Screen, ချစ်စရာကောင်းတဲ့ကီးဘုတ်။ အလင်း, ဒါပေမယ့်လက်၌ကောင်းတဲ့ခံစားရပါတယ်။ အဆိုပါပြောင်းပတ္တာ - ကြောက်မက်ဘွယ်သောအရာတို့ကို။ တစ်ဦးကျက်သရေတူသောအကျင့်ကိုကျင့်။ အခုတော့ငါ VIP တဦးတည်းထွက်ပြေးရှိသည်ပြန်လည်သုံးသပ်၏ဆိုးအစိတ်အပိုင်းတစ်ခုဖြစ်သည်။ အဆိုပါ Laptop ကိုဘက်ထရီပါဝါအပေါ်အလုပ်မဖြစ်ခဲ့ပါဘူး။ သင်သည်မည်သည့်သတိပေးချက်များခြင်းမရှိဘဲ, 10-15 မိနစ်အကြာတွင်သေဆုံးသည့်လက်ပ်တော့ကနေပါဝါကေဘယ်ချိတ်ဆက်မှုဖြုတ်ပါ။ ယခုအဆိုးဆုံးတစ်စိတ်တစ်ပိုင်းကြောင်း: Gearbest Service ကိုကြောက်မက်ဘွယ်သောထက်ပိုမိုခဲ့ပါတယ်။ သူတို့ကနောက်ကျောကသူတို့ကိုမှခွဲထွက်ကာအဆိုပါ Laptop ကိုပေးပို့ဖို့ကျွန်မကိုအတင်းအဓမ္မ။ ok, ငါက shouldnt အဖြစ်ကအလုပ်မလုပ်ပါဘူး, ထင်, ဒါမရှိကိစ္စများသည် gearbest ငါ့အလိုရှိသမျှရှုံးလွှမ်းမိုးလိမ့်မည်။ NO ။ သူတို့လက်ပ်တော့အဘို့အကြှနျုပျ၏ငွေပေးချေမှုပြန်အမ်းခဲ့ပါဘူး, ဒါပေမယ့်နောက်ကျောကသူတို့ကိုကတင်ပို့များအတွက်ရေကြောင်းကုန်ကျစရိတ်မဖုံးခဲ့သည် !!! နှင့်သူတို့သည်ငါ၏ပိုက်ဆံပြန်အမ်းဖို့အသက်အရွယ်ကိုယူ။ ငါဒီအခြေအနေကိုအပေါငျးတို့သနဲ့ငါ့အတှေ့အကွုံပျက်စီးကြောင့်ငါတကယ်အားလုံး options နဲ့အခြားအွန်လိုင်းဆိုင်များကိုစဉ်းစားပါလိမ့်မယ်အချိန်ဆိုးဆိုးရွားရွားစိတ်ပျက်နှင့်နောက်တယ် Gearbest.
CHUWI Hi10 Plus အား CWI527 လက်တော့ (Intel ကချယ်ရီ Trail x5-Z8350, 4GB RAM ကို)
AMSI GL62M 7REX - 1252 Gaming Laptop ကို Laptop ကို (i7-7700HQ, GTX1050Ti 4GB, 8GB RAM ကို)
Teclast F5 လက်တော့ (Intel က Gemini ရေကန် N4100, 8GB RAM ကို)